Safia Abdi Haase oo markii labaad ku guulaysatay bilad sharaf . - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Safia Abdi Haase oo markii labaad ku guulaysatay bilad sharaf .
Safiyo Abdi Haase oo ah kalkaaliso caafimaad(sykepleier) ayaa markii labaad ku guulaysatay bilad sharaf maqaamkeedu sareeyo. Biladan ayaa waxaa Safiyo gudoonsiiyay ururka haweenka Inner Wheel oo ah mid kamid ah ururada haweenka ugu waaweyn aduunka, kana dhisan 103 wadan. Safiyo ayaa xubin ka ah ururkan qaybtiisa Norwey.
Biladan ayaa waxay safiyo ku muteysatay ka shaqeynta iyo isku howlida caafimaadka haweenka, waxayna sidaas uga mid noqotay haween faro ku tiris ah oo biladan horey ugu guulaystay Norwey oo dhan. Mana aha markii ugu horeysay ee bilad sharaf ay hesho, sanadkii 2014 ayaa boqorka Norwey safiyo gudoonsiiyay bilad heer qaran ah, sidaas ay safiyo ku noqotay qofkii ugu horeeyay taariikhda ee ajnabi ah ee uu boqorka Norwey u magacaabo ridder av 1. klasse av St. Olavs. biladan iyo tii horeba waxay safia ku muteysatay daryeelida iyo ka warqabka caafimaadka hooyada iyo dhalaanka.
Sidoo kale marar badan ayay Safia kasoo dhex muuqatay warbaahinta wadanka, iyada oo ka hadlayso isu soo dhaweenta dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka iyo dadka u dhashay wadanka.
Previous articleqof Soomaali ah oo caawa toori lagu galiyay Kristiansand
Next articleGabar soomaali ah oo ay maxkamada sare ee wadanka ay ku wayday wax danbi ah